News Archives - Page 1210 of 2373 - Zimbabwe Today
October 19, 2018	News Comments Off on ‘Shootings inquiry a charade’
THE opposition MDC Alliance says the on-going public hearings by a commission probing post-election violence that left seven people dead on August 1 is “a choreographed charade” meant to sanitise the actions of the army and to protect President Emmerson Mnangagwa’s government. By Everson Mushava The army opened fire on …
A HARARE magistrate yesterday changed the plea of a 25-year-old Chitungwiza man who is accused of re-tweeting a message from a spoof account named after Zimbabwe Electoral Commission chairperson Justice Priscilla Chigumba after she had already convicted him of the crime. BY DESMOND CHINGARANDE Night Tawona Shadaya, who is represented …
A HARARE man, whose wife was fatally shot by soldiers in post-election violence on August 1, has given the Zimbabwe Defence Forces (ZDF) a 30-day ultimatum to accept liability and pay compensation or face legal action. BY CHARLES LAITON Thokozani Robert Maposa has also accused the army of having acted …
By Tendai Mugabe President Mnangagwa yesterday visited Vice President Constantino Chiwenga at his residence following his return from South Africa where he was receiving treatment. The Vice President was affected by the Bulawayo bombing incident in June, but could not receive thorough medical examination at the time as he soldiered …
By Alois Vinga ROMAN Catholic linked Italian Confederation of Trade Unions (CISL) has written to President Emmerson Mnangagwa expressing displeasure over the arrest of some Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) leaders and activists during a demonstration that was crashed by police a week ago. The worker based international group …
Fidelis Munyoro and Davison Kaiyo BELGIUM is sending a high-powered business delegation comprising 25 companies to Zimbabwe to explore investment opportunities, in a move expected to boost Government efforts to make the country an attractive investment destination. This was confirmed by incoming Belgian Ambassador to Zimbabwe Mr Didier Vanderhasselt yesterday …
By Alois Vinga AFRICAN Export-Import Bank (Afreximbank) says that it will finalise the US$500 million nostro stabilisation facility negotiated by Finance Minister Mthuli Ncube by the end of this month. The continental financial powerhouse has confirmed that they met Zimbabwean officials in Bali, Indonesia on the sidelines of the International …
Farirai Machivenyika and Panashe Machakaire THE Commission of Inquiry into the political violence that rocked Harare on August 1 yesterday carried out inspections of various places to assess the damage. The commission — chaired by former South African President Kgalema Motlanthe — has been carrying out public hearings on the …
By Robert Tapfumaneyi MDC Alliance national spokesperson Jacob Mafume says the main opposition has not been invited to give oral evidence before the Commission of Inquiry into the August 1 post-election disturbances in which six people were gunned down by the army. “We have not seen the invite if it …
Natasha Chamba Business Reporter THE Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) has warned dealers against deliberately withholding or limiting fuel supplies for speculative purposes, saying culprits risk prosecution or will have their trading licences cancelled. The country has lately been experiencing fuel shortages, with Energy and Power Development Minister Dr Joram …
Page 1,210 of 2,373« First...1,1801,1901,200«1,2081,2091,2101,2111,212	»	1,2201,2301,240...Last »